मोरङ ३ मा जित्दै ढकाल, भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई नमुना बनाउँछु’
| 2017-11-21 Published
निमार्ण सञ्चार, काठमाडौं । भानुभक्त्त ढकाल ने.क.पा एमालेका एक प्रखर युवा नेता हुन । असल राजनीतिक चरित्रका युवा नेता नेपालको राजनितिमा निकै चर्चामा छन् । खरो शैलीका नेता संसदिय दलका प्रमुख सचेतक समेत बनिसकेका छन् । उनी विद्यार्थी नेताका रुपमा खरो, मिजासिलो रुपमा प्रस्तुत हुने नेता हुन । तेह्रथुमको ओख्रे गाविसमा २०१८ सालमा जन्मिएका ढकालले अनेरास्वयुको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेर अखिलका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत बने ।
ढकाल अहिले मंसिर २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा मोरङ–३ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा कांग्रेस नेता सुनिल शर्मा भिड्दै छन् । निर्माण सञ्चारसँग भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चुनावकै सेरोफेरोमा रहेर ढकालसँग गरिएको कुराकानी :
चुनावी प्रचार प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ?
क्षेत्र नं. ३ का जनताको घरदैलोसम्म पुगेर उहाँहरुका समस्या बुझ्दै विकास निर्माणका कामलाई नियाल्दै सम्भावना र चुनौतीलाई ध्यान दिँदै चुनावको तयारी गर्दैछु । बिहान उठेर होटलमा नभई मतदाताको घरमा गएर चिया खाने मेरो पहिलो काम हो ।
तपाइँका चुनावी एजेन्डा के–के हुन् ?
यसपटक म निर्वाचित भए वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणा–पत्र अनुसार सम्पूर्ण काम गर्छु । यसको अक्षरसः पालना हुनेछ । यद्यपि, मेरा आफ्नै एजेन्डा पनि छन् । विकास निर्माणको गति यहाँ सुस्त छ ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि केही काम भएका छन् तथापी केन्द्रको आँखा क्षेत्र नं ३ मा पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणका कुनै पनि काम समय सिमाभित्रै गराउने मेरो प्रथामिकता रहनेछ ।
क्षेत्र ३ मा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यववस्थित बनाउने छु । सबैभन्दा समस्याका रुपमा रहेको पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हो । त्यहाँ केही व्यक्तिले प्रलोभनमा पारेर आफना मेडिकल कलेज सुक्ने डरले विकास हुन दिएका छैनन् । राज्यको लगानी खोलै खोला गइरहेको छ ।
गरिब जनताका छोरा छोरीले सर्वसुलभ तरिकाले पढ्न पाएका छैनन् । घरको भात खाएर पढ्ने ठाउँको सट्टा महँगो तिरेर विराटनगरमा पढ्नु पर्छ म त्यसको अन्त्य गर्छु, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, धार्मिक सद्भावको विकासलगायत काम मेरा प्रथामिकतामा हुनेछन् ।
म झुटो बोलेर झुटको खेती गर्ने मान्छे होइन, म मतदाताको घरमा पुग्दा जे बोलेको छु, त्यही गर्छु । म झुट बोल्दिनँ, जे बोल्छु त्यही गर्छु । लेखेर राख्नुहोस् ।
यो क्षेत्रमा सबैभन्दा समस्या सुकुम्बासी समस्या रहेको छ । उनीहरुको पीडा मैले बुझेको छु । पहाडको कुना कन्तरामा हुर्केको म यस्ता समस्या बुझ्छु । म दुई नम्बरी काम जान्दिन ।
तपाईं उम्मेदवार भएको क्षेत्र कांग्रेसले विभिन्न शिविरहरु चलाई रहेको छ, तपाईंको त नयाँ अनुहारले जित्नेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
म उम्मेदवार भएको क्षेत्र पहिला देखिनै वाम गठबन्धन बलियो भएको क्षेत्र हो । संविधान जारी भए पछि राज्यको नयाँ संरचना हुँदा पनि कांग्रेसका साथीहरुले यो क्षेत्र चाहिं कम्युनिस्टलाई दिऊ भनेर छुट्याएका हुन् । त्यतिबेला कांग्रेस बलिया थियो मोरङमा उहाँरुकै सांसदहरु धेरै थिए । अहिले त उहाँहरु रुन मात्रै सक्नु भएको छैन । विचराहरु मोरङमा एक सिट जित्नु हुन्न ।
शिविर चलाएर झुटको राजनीति गर्नु छैन मलाई । शिविरका नाममा ब्रमलुट गरेको मतदाताले बुझेका छन् । पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई डक्टर भन्दै औषधि चाहिँ किन्न लगाएर शिविरमा गएका बिरामीलाई थप पीडा दिने काम मात्रै गरेका छन् । अहिले जनता पहिलेजस्तो त्यत्ति मूर्ख छैनन् । कुनै स्थानमा एक छिनमा सर्प देखिने हो । त्यसपछि एकैछिनमा त्यहाँ देखिँदैन । निर्वाचन क्षेत्र पनि उस्तै हो ।
म जनताको बीचमा झुट बोल्ने नेता होइन । त्यसकारण मलाई यो क्षेत्रका जनताले विशेष माया गर्नुहुनेछ । मैले विश्वासको मत पाउँछु करिब साढे ३० हजार मतका साथ चुनाव जित्छु । मैले अहिले सपना पनि जितेकै र विपना पनि जितेकै देखिरहेको छु ।
तपाईंले निर्वाचन जितेपछिका योजना के के हुन ?
म पार्टीमा राजनीति अहिलेसम्म गरिरहेको छु । अहिलेसम्म निश्वार्थ रुपमा जनताको काम गरिरहेको छु, भोलि पनि गर्छु । मलाई भवगानले पनि सधै स्वार्थ नगरी जनताको काम गर्नु भनेर पठाएका रहेछन । मलाई अहिले सम्म काम गर्न पुगेकै छ भोलि पनि गर्छु ।
मैले सबैभन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको र विद्यालयको देखेको छु । यो क्षेत्र मात्रै होईन उत्तरी मोरङमै सामान्य उपचारभन्दा अन्य केही पनि हुँदो रहेन रहेछ । त्यसो त ठूला अस्पतालहरु नक्कली प्रमाण–पत्र बोकेर मोडिकलका नाममा अस्पताल चलाई रहेका छन् । तिनको अन्त्य गर्छु । शैक्षिक क्षेत्रको उतिकै खाँचो छ, जितेको ५ वर्षभित्र नमुना क्षेत्र बनाएर छाड्छु ।
यो क्षेत्रमा त बढी अन्तर्घात हुँदैछ भन्ने पनि हल्ला छ नि ?
हो तपाईंले जे सुन्नु भो सही सुन्नु भो यो हल्ला मात्रै हो । यस कुरामा म पटक्कै विश्वास गर्दिनँ । हाम्रो पार्टी वा वाम गठबन्धनबाट कुनै पनि किसिमको अन्तर्घात हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसपटक मेरो क्षेत्रमा मात्रै हैन, अन्य स्थानमा पनि अन्तर्घात हुने सम्भावनै छैन ।
अन्त्यमा, केही भन्नुहुन्छ ?
क्षेत्र नम्बर ३ का मतदातालाई मलाई अत्यधिक मत दिएर विजयी गराइदिनुहुन अनुरोध गर्छु । ताकि, त्यो क्षेत्र भोलि चाँडै विकासमा अघि बढ्न सकोस् ।
मंगलबार ५, मंसिर ०७४